Blogs - Myanmar Digital Artists Society
27th Sea Game Advertising Bill Board Design Challenge ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်....
မြို့တွင်းနှင့် လေဆိပ်၊ ကားဂိတ်၊ ရထားဘူတာရုံများတွင် တပ်ဆင်မည့် လမ်းဖြတ်ပိုစတာနှင့် လမ်းဘေးဝဲယာဆိုင်းဘုတ် အရွယ်အစားမှာ (60 ပေ x 12 ပေ၊ 30 ပေ x 15 ပေ၊ 30 ပေ x 12ပေ) အရွယ်အစားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လမ်းလယ်ကျွန်းများတွင် တပ်ဆင်မည့် Banner အရွယ်အစားများမှာ (12 ပေ x3ပေ၊5ပေ x 3… Continue
Added by su mon on January 25, 2013 at 10:36am —
No Comments After effect..... cs 6
after effect cs6 မှာပါလာတဲ့ features တွေထည်းက ကျွန်တော်နှစ်သက်မိတဲ့ တစ်ခုကတော့ 3d camera tracking ပါ။
အရင်က ကျွန်တော်တို့ tracking လုပ်ဖို့အတွက် အခြာသော software များ အကူအညီယူရပါတယ်( pf track syntheyes, match movie, )စတာတွေကိုမှရပါတယ်။ သို့မဟုတ် fountry ကထုတ်တဲ့ camera tracker ဆိုတဲ့ plugin ကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ရပါတယ်။
အခုတော့ တော်လေးတဆင်ပြေသွားပါတယ်။ cs 6မှာ 3d 3d tracking ပါလာလို့ပါပဲ ။
movie တွေကို track လုပ်ပီး image matte painting လုပ်တာ သို့ compositing… Continue
Added by Swann Yee on January 11, 2013 at 11:34am —
No Comments Job Inquiry :2Graphic Desinger
Job Inquiry :2Graphic Designer
: Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသူ
: salary basic 80,000
Contact : 01-211870, 224820, 2301195
*required CV with recent photo*
*လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရန်* Added by sheep on August 21, 2012 at 12:00pm —
No Comments Billboard Advertising(ထိရောက်မှုရှိသောBillboard ကြော်ငြာခြင်းများ)
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်ဟာ ဒီပို့စ်ကို Design နဲ့ပက်သက်ပြီး ဆရာကြီးမို့လို့၊ Designကိုနောကျေလွန်းလို့ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။
Designနဲ့ပက်သက်ရင် ကျနော်ဟာ လေ့လာသင်ယူတစ်ဦးမျှသာဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမဲ့လည်း client တွေ၊ နောက် ကျနော်တို့လို Graphic Designerတွေကို Billboard Advertisingနဲ့ ပက်သက်ပြီးသုံးသပ်စေချင်လို့ပါ.....
Designer ဒါမဟုတ် ပိုက်ဆံအကုန်ကျခံပြီးBillboardထောင်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာဖော်ပြမယ့်အချက်(၃)ချက်ကို ဦးစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်.....
(1)Billboard ကို… Continue
Added by Lwin Ei San on August 13, 2012 at 1:24pm —
အမျိုးသား ဒီဇိုင်နာ ရှာနေပါသည်။
ကျနော် အမျိုးသား Graphic Designer တစ်ယောက် ရှာနေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ 09-507 5615 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး၊ designeservice.one@gmail.com ကိုလည်း CV ပို့နိုင်ပါတယ်။ အဓိကလိုအပ်ချက်က PS နဲ့ AI (or) Cdr ကို ကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ Creative Idea ထိုက်သင့်သလောက် ရှိရပါမယ်။ CV အား mail ပို့မည်ဆိုလျှင် မိမိဖန်တီးထားသော Artworks များအား attach လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျား ...P.S. သူကြီးရေ ... အလုပ်ခေါ်တဲ့ Tag မတွေ့လို့ ဒီမှာပဲ ကိုင်ပလိုက်ပီ ... Admin က ကန့်ကွက်ရင် ပြန်ဖျက်ပေးမယ်နော် ... Added by Zayar Phyoe on June 13, 2012 at 1:34am —
cremotiv = creative + emotive
ခါတိုင်းတော့ အလုပ်ကြော်ငြာတွေတွေ့တယ်ဗျ။ ကြော်ငြာထည့်ရန် ဆိုတဲ့ button လေးလဲတွေ့တယ်ဗျ။ အခုမတွေ့တော့လို့ ကျွန်တော့်အလုပ်ကြော်ငြာလေးကို ဒီမှာပဲတင်ပါရစေဗျာ။
Added by Myo-Unicorn on June 8, 2012 at 1:08am —
No Comments သူ့အကြိုက်! ကိုယ့်အကြိုက်!
လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါသည်။ ။ Aung Kyaw Khin Added by Aung Kyaw Khin on February 6, 2012 at 12:23pm —
(www.smpasoe.com) Graphic Designer ကျား/မ(၅)ဦး * အိမ်ထောင်မရှိသူ * Adobe photoshop , Flash , Firework , Website Banners ကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်ရမည်။ * အထက်တန်းအောင်(သို့ မဟုတ်) ဘွဲ့ ရ ဖြစ်ရမည်။ * Design နှင့်ပတ်သက်၍ တီထွင်ညဏ်နှင့် အတွေးအခေါ် ကောင်းရမည်။ * အလုပ်လျှောက်ပါက မိမိကိုယ်တိုင် edit လုပ်ထားသော photo များအား smpasoe.service1@gmail.com သို့တပါတည်: ပို့ပေ:ရမည်။ Contact - Hein Zaw(admin) Ph-383822…
Added by Genesis on January 12, 2012 at 11:33am —
No Comments 3D Building Design
Added by WHAN on January 6, 2012 at 1:31pm —
No Comments Share --- 1
Added by angle mooon on December 7, 2011 at 9:52pm —
No Comments MY SKETCH BOOK
Added by Aung Kyaw Khin on September 28, 2011 at 5:30pm —
Making of "Chocolate love"
Added by kaung myat kyaw on September 20, 2011 at 3:50pm —
Anime ချစ်သူများအတွက် MM Otaku
ကျွန်တော်တို့ MM Otaku site လေးကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်ဖို့ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ..။ ကျွန်တော်တို့ site လေးက ဂျပန် Anime ချစ်သူတွေစုထားတဲ့ site လေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ site မှာ Anime review များဖြင့်လောလောဆယ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Anime ဇာတ်လမ်းများကို ဈေးနှုန်းအချိုသာဆုံးသောနှုန်းထားများဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပြီ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ site မှာ anime review တစ်ပုဒ်ရေးပါက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ… Continue
Added by Mr-Yang on September 12, 2011 at 9:32pm —
Photo shooting Diary For smpasoe.com
Added by Genesis on August 18, 2011 at 12:58pm —
မြန်မာပြည်တွင် ထူးထူးခြားခြား 3D ကာတွန်း Animation ထွက်ရှိ။
မြန်မာပြည်တွင် ထူးထူးခြားခြား 3D ကာတွန်း Animation ထွက်ရှိသည်။
(Maya software) ကို အသုံးပြုထားသည်။ တို့အနေနဲ့ အားပေးသင့်သည်ဟုထင်သည်။မြန်မာတွေ နည်းပညာဘက်မှတိုးတက်ဖို့အတွက် တယောက်ကရှေ့ကဦးဆောင်လိုက်သည်ကို တို့တတွေ သိရမည်။ လူတိုင်းကတော့… Continue
Added by TAY ZA on July 16, 2011 at 3:06pm —
Asian media art တင်ဆက်နိုင်မှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုဝဏကျော်မှ ဒုတိယ ရရှိသွားကြောင်းသိရပါသည်။သူသည် ကျွန်တော့နှင့် အလုပ်မလုပ်ဘူးပါဘူး။သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်သည် သူနှင့်အလွတ်တန်း motion graphic လုပ်ရန် တိုင်ပင်ခဲံ့ရသည်။သူသည်ကျွန်တော့ကိုလမ်းညွှန်ပေးသောသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်။သူပြောသောအချက်တွင် နိုင်ငံခြားတွင် လုပ်ကိုင်ချင်သော သူများသည် မြန်မာပြည်တွင် တော်တော်ကို ကြိုးစားထားမှရနိုင်မည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည်… Continue
Added by TAY ZA on July 11, 2011 at 7:12pm —
"We are shaped by our thoughts; we become what we think. When… Continue
Added by kaung myat kyaw on July 10, 2011 at 11:50am —
3ds max ဆိုတာဘာလဲ... :) Added by Ko Thu on July 7, 2011 at 9:57am —
မျိုးကြီး ခွေထွက်တော့ ကာဗာ ကြည့်ပြီး လက်အရမ်းယားလာတာနဲ့ ဘဲ လုပ်ထားတာ. Added by kNt on June 9, 2011 at 12:09pm —
sucide plan ဆိုတဲ့ wallpaper လေးတစ်ခုပြချင်လို့ပါ.
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားတာပါ.. ဝေဖန်ပေးပါဦး.. Added by kNt on June 9, 2011 at 11:42am —
After effect..... cs 6
Job Inquiry :2Graphic Desinger
Billboard Advertising(ထိရောက်မှုရှိသောBillboard ကြော်ငြာခြင်းများ)
Principle of Color Theory - အရောင်၏အခြေခံသဘောတရား
ကနုတ်ပန်း ( ၁ )
ကနုတ်ပန်း(၂) ။ ဆရာ ဦးအေးမြင့် ( မြန်မာ့ရိုးရာ ဒီဇိုင်း) စာအုပ်မှ ခေတ်အဆက်ဆက် ကနုတ်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများ
Web design အကြောင်း တစ်ပိုင်းတစ်စ
၂၀၁၁ သင်္ကြန် ဓာတ်ပုံအချို့ (၁) + (၂)
2013January (2)2012August (4)June (2)February (1)January (2)2011December (1)September (7)August (1)July (4)June (4)May (2)April (1)March (2)January (5)2010December (8)November (2)October (4)September (2)August (3)July (6)June (9)May (7)April (9)March (25)February (3)January (12)2009December (11)November (7)October (6)September (30)August (21)July (10)June (4)May (3)April (1)March (6)February (9)January (9)2008December (3)November (13)October (16)September (39)August (20) Welcome toMyanmar Digital Artists Society